डोनाल्ड ट्रम्पले किन उल्ट्याए हुवावेमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध ? – Nepal's No. 1 Digital Newspaper
By डिजिटल खबर Last updated Jul 1, 201970
एजेन्सी । अमेरिकी सरकारले हुवावेलाई कलोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको ६ हप्तापछि त्यसमा ‘यू टर्न’ लिएको छ ।
गत मे महिनामा अमेरिकाको वित्त मन्त्रालयले लाइसेन्स नलिनइकन अमेरिकामा निर्माण भएका कुनै पनि सामाग्री हुवावेलाई बेच्न नपाइने नियम लागु गरेको थियो ।
हुवावले अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा र विदेश नीतिमाथि हानी पुर्याउने काम गरिरहेकाले नयाँ व्यवस्था गरिएको अमेरिकी अधिकारीले बताएका थिए ।
शनिवार ट्रम्पले हुवावेलाई उपकरण बेच्न नपाउने आफ्नो सरकारको निर्णय उल्टाउँदै भने, ‘ठूलो राष्ट्रिय आपत्तकालिन समस्या नल्याउने अवस्थामा अमेरिकी कम्पनीले तिनको उपकरण हुवावेलाई बेच्न सक्छन् ।’
ट्रम्पको घोषणा जी–२० सम्मेलनको क्रममा उनका चिनियाँ समकक्षी सी जिनपिङसँगको भेटवार्तापछि आएको थियो ।
चीन र अमेरिकाका राष्ट्रपति आफ्ना देशका प्रतिनिधिसहित दुई देशको व्यापारमा आएको गतिरोध छलफल गर्न भेटवार्ता गरेका थिए । वार्तामा हुवावेको विषय पनि उठेको थियो ।
ट्रम्पले हुवावलाई कालो सूचीबाट हटाएपछि हुवावेले आफ्नो आधिकारिक ट्वीटर एकाउन्टमा यसबारे टिप्पणी गर्दै लेखेको छ, ‘यू–टर्न ? डोनाल्ड ट्रम्पले हुवावेलाई पुनः एक पटक अमेरिकी प्रविधि किन्न अनुमती दिने बताएका छन् ।’
हुवावेले अमेरिकी आशंकामाझ विगतदेखि नै आफूले कुनै गल्ती नगरेको बताउँदै आएको थियो । उसले प्रतिबन्ध लागेदेखि नै अमेरिकी उत्पादनमाथि पहुँच सुचारु गर्न राजनीतिक प्रभाव प्रयोग गरिरहेको थियो ।
हुवावेले आफ्ना उत्पादन निर्माणका क्रममा प्रयोग गर्ने अधिकांश उपकरण अमेरिकी सामाग्री रहँदै आएको छ । मुख्यतः मोबाइल निर्माणमा अत्यावश्यक हुने चिप्समा अमेरिकी कम्पनी विशेषत इन्टेल निर्विकल्पिय रहँदै आएको छ । त्यस्तै हुवावेले प्रयोग गर्ने अपरेटिङ सिस्टम ‘एण्ड्रोइड’ अमेरिकी कम्पनी गुगलको उत्पादन हो ।
गुगलले मे महिनामा हुवावेविरुद्ध अमेरिकी सरकारले लिएको नीतिलाई अनुसरण गर्ने क्रममा हुवावेको एण्ड्रोइड प्ल्याटफर्ममाथिको पहुँच रोकिदिएको थियो । त्यस कदमलाई हुवावेको मोबाइल व्यवसायविरुद्ध ठूलो धक्का मानिएको थियो ।
तर प्रतिबन्धबाट हुवावेलाई मात्र असर गरिरहेको थिएन । प्रतिबन्धका कारण डाटा भण्डारण गर्ने सामाग्री निर्माता अमेरिकी कम्पनी माइक्रोनले उसको आयमा उल्लेख्य ह्रास सामना गर्यो । हुवावेलाई कालोसूचीमा राखे लगतैको हप्तामा उसको आयमा ४० प्रतिशत कमी आएको थियो ।
हुवावेविरुद्धको प्रतिबन्धबाट अमेरिकाका आपुर्तीकर्ता कम्पनी खुसी नरहेको ट्रम्पले पनि स्वीकारेका छन् ।
‘अमेरिकी कम्पनी आफ्नो बिक्री कमी भएकोमा सन्तुष्ट छैनन्,’ ट्रम्पले भन्ने गरेका थिए । उनले अमेरिकी कम्पनीले हुवावेलाई ‘ठूलो परिमाणको उपकरण’ बिक्री गर्ने आफूलाई जानकारी भएको बताउने गरेका छन् ।
तर अमेरिकाले हुवावेमाथि उसका सामाग्री किन्न मात्र प्रतिबन्ध लगाएको छैन । ट्रम्पले मे महिनामा हस्ताक्षर गरेको एउटा अध्यादेश अनुसार अमेरिकी कम्पनीले हुवावेसँग कुनै पनि दुरसञ्चार उपकरण किन्न र प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । यो प्रतिबन्ध मुख्यतः हुवावेको फाइभ–जी नेटवर्क प्रविधिका उपकरणलाई केन्द्रित गरेर लगाएको विश्वास गरिन्छ ।